Abimeleka - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Raha fantatrao ny etimôlôjian’ ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto.
Abimeleka ♦ X-SAMPA : ♦ AAI : abimelekḁ
anaran' ny mpanjakan' ny Filistina maromaro izany, ka angamba anaram-boninahitra izay niombonan' izy rehetra nifandimby, toy ny hoe Farao tamin' ny mpanjaka maro tany Egypta, ary ny hoe Kaisara sy Aogostosy tamin' ny mpanjaka maro tany Roma.
Ohatra tsy ampy na tsy eo. (hanampy)
Mpanjakan ny Filistina anankiray tany Gerara, any atsimon' ny tany Kanana (Gen. xx. 1, 2). Nampaka an' i Saraha vadin' i Abrahama izy, fa fomban'ny andriandahy tamin' izany tany izany ny mampaka ny vehivavy tsara tarehy rehetra amy ny fanjakany, mba ho ao amin' ny trano itoeran' ny vadin' ny mpanjaka (Gen. xii. 15 ; Est. ii. 3). Nefa kosa, rehefa noraran' Andriamanitra Abimeleka noho ny ratsy nataony, dia nampody an' i Saraha indray izy ary nanome zavatra maro ho azy sy Abrahama ho fanalan-tsiny.
Mpanjaka anankiray koa tamin' ny Filistina tany Gerara, izay indray nihira tamin' i Isaka. Ny teny milaza izay nataony tamin-dRebeka, vadin' i lsaka, dia mitovitovy amin' ilay voalaza teo hiany ny amin' iSaraha (Gen. xxvi. 1).
Zanakalahin' i Gideona mpitsara tamin' ny vadintsindranony tao Sekema (Mpit. viii. 1, 31). Rehefa maty rainy, dia namono ny rahalahiny fito-polo lahy izy, afa-tsy Jotama faralahy, izay afa-nandositra. Ary rehefa afaka izany, dia niray tetika tamin' ny anadahin-dreniny izy mba hitaona ny Sekemita hifidy azy ho mpanjakany. Nony ren' i Jotama fa Abimeleka efa nofidina ho mpanjaka, dia nikabary teo anatrehan' ny vahoaka izy ka nilaza ilay angano ny amin'ny Hazo rehetra nifidy Mpanjaka' (Mpit. ix. 1-16). Rehefa nanjaka telo taona Abimeleka, dia niodina ny vahoaka, nefa noresen' i Abimeleka izy. Ary rehefa afaka kelikely dia nankany Tebeza izy ka nitoby tandrifiny sady nabafaka azy. Koanefa nisy vehivavy anankiray nanjera vato fikosoham-bary tamin' ny lohan'i Abimeleka ka nahavaky ny karan-dohany. Dia natahotra izy fandrao holazain' ny olona fa vehivavy no nahafaty azy, ka dia hoy izy tamin' ny mpitondra ny fiadiany : "Tsoahy ny sabatrao ka vonoy aho, ' ' ka dia matiny izy. Izany no namnlian' Andriamanitra ny ratsy nataon' i Abimeleka noho ny nanionoany ny rahalahiny fito-polo lahy sady nahatanteraka ilay fanozonana nataon' i Jotama (Mpit. ix. 20-67)
Abimelekako Abimelekanay, Abimelekantsika
Diksionary amin'ny Baiboly natao ho fanazavana ny Soratra Masina
Dikan-teny tsy ampy
frantsay : Abimélec
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Abimeleka&oldid=17681730"
Etimolojia tsy ampy
Anarana amin'ny teny malagasy
Wiktionary:Ohatra tsy ampy amin'ny fiteny malagasy
Voaova farany tamin'ny 24 Martsa 2015 amin'ny 17:26 ity pejy ity.